Aayaha editorSeptember 1, 2020
Dad badan ayaa guursada waxayna bilaabaan inay ka qoomameeyaan sababta ay u guursadeen qofkaas oo mar ay sheegi jireen inay aad u jecel yihiin.
Laakiin waxaa jira qaar badan oo aan ka qoomameyn guurkooda diyaarna u ah inay ka gudbaan culeys walbo oo soo wajaho
Kuwani waa calaamado muujinaya inaadan ka shalaayneyn guurkaaga:
1. Wali waad jeceshahay lamaanahaaga
Haddii aad wali jeceshahay ninkaaga ama xaaskaaga kadib sanado uu guurkiina jiray kadib taasi waa calaamad muujineysa inaad diyaar u tahay in guurkaas uu waligiis jiro ama waaro.
Jacaylku waa astaan weyn oo aanan laga qoomamaynayn.
2. Ka go’naansho
Waxaad jeceshahay waad qiimeysaa waadna ilaalisaa waxaad qiimeyso. Haddii aad wali tahay qof ay ka go’antahay in guurku shaqeeyo wax walba oo dhaco markaa wax qoomamo ah oo xittaa yar kama qabtid guurkaaga.
Inkastoo laga yaabo in mararka qaar farxad la’aan aad noqotid, hadana haddii farxadaadu ay ka badantahay farxad la’aanta kadib waxaad heysataa guur wanaagsan oo mustaqbal leh isla markaana loo baahanyahay inaad sii wado dhismihiisa iyo hormarintiisa.
Haddii aad ku faanto guurkaaga iyo marxaladaha aad isla soo marteen adiga iyo lamaanahaaga markaas wax shalaay ah kama qabtid guurkaaga. Dadka ku faraxsan kuna faano guurkooda iyo lamaanayaashooda ayaa ah kuwa aanan qoomameyn.
5. Dadaal iyo maalgalin
Guurku waa maalgashi; micnaha waa inaad ku maalgalisaa waqtigaaga, maalkaaga iyo tamartaada si aad uga dhigto mid shaqeeya.
Haddii aad weli xiiseyneyso inaad lammaanahaaga ka dhigto mid wanaagsan isla markaana aad rabto in guurkaagu noqdo mid aad u wanaagsan markaa waxaad leedahay guur qurux badan.
Haddii aad wali aaminsantahay guusha guurkiina iyo inaad wadajir noqon doontaan mustaqbalka walina aad rabto inaad kordhiso xiriirka aad laleedahay lamaanahaaga kadib guurkiinu waa mid qiimo leh oo aadan ka qoomameyneyn.
Maku qanacsantahay guurkiina? Qanacsanaantu waa astaan muujineysa inaadan wax shalaay ah qabin.
Qanacsanaantu waxay la timaadaa farxad iyo dareen wanaagsan.
Haddii aad waxyaabahan wali ku heysatid guurkaaga, markaa guurkaagu si wanaagsan ayuu u shaqeynayaa wax qoomamo ahna ma lihid.